कस्तो रहला तपाइको २०७८ सालको अन्तिम महिना ? |
Home राशिफल कस्तो रहला तपाइको २०७८ सालको अन्तिम महिना ?
कस्तो रहला तपाइको २०७८ सालको अन्तिम महिना ?
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – चैत महिना खर्चिलो देखिए पनि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। सुरुमा सोखले खर्च बढाउनेछ भने बीचमा दिगो कामका लागि लगानी जोहो गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। मिहिनेतले कर्मयोग भने सबल बन्नेछ। केही व्यावहारिक चुनौती देखिए पनि पुरुषार्थी कामले उचाइमा पुर्याउनेछ। केही खर्च लागे पनि देश–विदेशको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ।
नोकरीमा प्रवेश वा स्थानान्तरणको बलियो सम्भावना छ। व्यापारतर्फ कम लगानीमा मनग्य लाभ उठाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू स्वयं कमजोर बन्नाले फाइदा उठाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। सेयरतर्फ सुरुमा लगानी गर्नुपरे पनि महिनाको उत्तरार्धमा प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। समय र नियमको पावन्दीलाई विशेष ध्यान दिनुहोला, अहिलेको सानो प्रयत्नले पछिसम्म फाइदा भइरहनेछ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – यो महिनामा कर्मसाधना गरी राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। नोकरी तथा राजनीतिमा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। तारिफयोग्य कामले प्रशंसा, ख्याति र मानसम्मान दिलाउनेछ। आत्मसम्मानका साथ आम्दानी बढ्नेछ। आयआर्जनका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। असल शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्।
भाग्यले असल प्रेमपात्र जुराउन सक्छ। परिवारजनमा आत्मीय भाव बढ्नेछ। घर–गृहस्थीमा मन रमाउनेछ। सेयर, व्यापार, कृषि, भूमि र पशुधनबाट यथेष्ट लाभ मिल्नेछ। महिनाको उत्तरार्धमा कार्यक्षेत्रमा केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आउन सक्छन्। अत्यधिक परिश्रमले शरीरमा थकान र कमजोरी निम्त्याउन सक्छ। तर तत्काललाई केही समस्या देखिए पनि दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – यस महिनामा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। सामाजिक प्रभाव बढ्नेछ र नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। समुदायको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। राष्ट्रिय स्तरको मान–सम्मान प्राप्त हुन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरू नजिकिनेछन्। सेवा तथा परोपकारी कर्मले प्रसिद्धि दिलाउनेछ। तर सुरुमा परिस्थिति केही संघर्षमय रहने देखिन्छ।
स्वास्थ्य कमजोर हुनाले समयमा उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्छ। सहयोगीहरू स्वार्थका पछि लाग्नेछन्। सेयर र व्यापारमा मन्दी आउनुका साथै लगानी अड्किने सम्भावना छ। उपलब्धिको स्रोत कमजोर हुन सक्छ। दोस्रो सातादेखि स्थितिमा सुधार आउनाले भविष्यप्रति आशा जाग्नेछ। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुन सक्छ। कर्मयोगले उचाइको बाटो समाउनेछ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – यो महिना केही संघर्षमय रहनेछ। अधिक परिश्रमले थकान र कमजोरी निम्त्याउन सक्छ। घर–परिवारमा पनि असमझदारी बढ्ने सम्भावना छ। केही व्यावहारिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने समय रहेकाले सावधानीसाथ काममा जुट्नुहोला। आयस्रोत कमजोर हुनाले नयाँ काम थाल्न बाधा पर्नेछ। सरोकार नभएका विषयमा चासो राख्नाले व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ।
धार्मिक तथा सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भाग्यले साथ दिनेछ। केही समय अरूका काममा जुट्नुपरे पनि अन्ततः आस मारेको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। महिनाको उत्तरार्धमा पछिका लागि लगानी गर्न सकिनेछ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन खोज्नेहरू स्वाभिमानी व्यवहारले परास्त हुनेछन्। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, ट – यो महिना केही संघर्षमय रहनेछ। अधिक परिश्रमले थकान र कमजोरी निम्त्याउन सक्छ। सरोकार नभएका विषयमा चासो राख्नाले व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ। अल्पकालीन सोचाइले प्रगतिको मार्ग रोकिने हुँदा सावधानीसाथ काममा जुट्नुहोला। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भाग्यले साथ दिनेछ। पूर्वार्धमा व्यवसायमा मन्दी आए पनि उत्तरार्धमा केही सुधार हुनेछ। टाढिएका सहयोगीहरू पुनः जुट्नेछन्।
अधुरा काम बन्न थाल्नेछन् र रोकिएको आम्दानी हातलागी हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले पुरानो विवाद समेत सम्झौतामा टुंग्याउन सकिनेछ। आस मारेको प्रतिफल प्राप्त हुनाले उत्साहित भइनेछ। असल मित्र, शुभचिन्तक वा जीवनसाथीको सहयोग प्राप्त भइरहनेछ। चोटपटक सम्भावना देखिएकाले सवारी तथा हतियार सावधानीपूर्वक चलाउनुहोला।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – यो महिनामा अवसर र चुनौती बराबर आउनेछन्। परिवेश रमाइलो देखिए पनि महिना खर्चिलो रहनेछ। विभिन्न अवसर आए पनि समयमा निर्णय लिन नसक्दा पछि परिनेछ। परिस्थितिवश घरेलु कामकाजमा समय बित्नेछ भने उद्देश्यमूलक कामलाई प्राथमिकता दिन नसकिएला। प्रेम तथा दाम्पत्यमा असमझदारी बढ्नेछ।
धेरै आम्दानी नभए पनि व्यापार–व्यवसाय सामान्य रूपमा चल्नेछ। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम बन्न सक्छ। महिनाको उत्तरार्धमा शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक सहयोगले चुनौतीपूर्ण कामसमेत सम्पादन हुनेछ। महत्त्वाकांक्षा पूरा नभए पनि पहिलेको उपलब्धि र साख जोगाउन सफल भइनेछ। स्वास्थ्यका लागि मौसमी समस्याबाट सजग रहनुहोला।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – काममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। आफ्नो अभियानमा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। आँटले काम लिँदा मनग्य फाइदा हुनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। आर्थिक समस्या सुल्झनेछ र भौतिक साधनसमेत जुटाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौडमा विजय प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम थालनी हुने समय छ।
शत्रुबाधा हट्नेछ भने रोग निवारण हुनेछ। भविष्यका लागि नयाँ काममा जग बसाउन सकिनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ र आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ। महिनाको उत्तरार्धमा भने पारिवारिक असमझदारीले वादविवाद निम्त्याउन सक्छ। अवसरका लागि बलजफ्ती काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्ला। प्रेमको बन्धन समेत कमजोर हुनेछ। तापनि सामान्य उपलब्धिलाई गुणात्मक बनाउन सकिनेछ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – वास्थ्यमा मौसमी समस्याले सताए पनि अध्ययन र व्यवसायमा राम्रै फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा लेखन कलामा निखारता आउनेछ। आँटेका काममा केही विलम्ब भए पनि शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नेछ। सन्तानका माध्यमबाट पनि लाभ मिल्नेछ। टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट तथा मेलमिलाप हुनेछ। गुरुजनको प्रेरणाले मन दह्रो हुनुका साथै अध्ययनमा हौसला प्राप्त हुनेछ।
नोकरी तथा पेसा–व्यवसायमा फाइदा हुनेछ। बौद्धिक क्षमता बढ्नुका साथै अध्ययनमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ। सानो प्रयत्नले आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनेछ भने अड्किएका काम पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। क्षमता प्रदर्शन गरेरै स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। देश–विदेशको यात्रा गर्ने साइत जुर्न सक्छ। उत्तरार्धमा प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि प्रगाढ हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – अवसरका लागि विभिन्न चुनौतीसँग जुध्नुपर्ला। उच्च महत्त्वाकांक्षाले सामूहिक चेतना खलबल्याउन सक्छ। घर–जग्गा वा स्थायी सम्पत्तिमा विवाद आउनाले आफन्तमाझ एकताको भावना विखण्डित हुनेछ। आफ्ना कमजोरीप्रति साथीभाइले गुनासो गर्नेछन्। स्वास्थ्य कमजोर हुनेहरूलाई छाती, फोक्सो तथा घाँटीको समस्या बढ्न सक्छ।
महिनाको उत्तरार्धमा सत्पात्रको संगतले व्यवहारमा सुधार ल्याउनेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनाले स्थिति अनुकूल बन्नेछ। लचिलो व्यवहारले समस्याको गाँठो फुकाउन सकिनेछ। कृषि तथा व्यवसायमा सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र फेला पर्नेछन्। विद्यार्थीहरूमा तर्कशक्ति बढ्नेछ। बुद्धिको उपयोगले अघि बढ्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ। सामान्य काममा अलमलिनु भन्दा दिगो अवसरका लागि प्रयत्न गर्नुहोला।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – महिनाको प्रारम्भमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ भने नसोचेको रकम समेत हातलागी हुन सक्छ। तर खर्चालु प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा सजग रहनुपर्नेछ। पछिसम्मलाई रकम जोहो गर्ने प्रयास गर्नुहोला। कामको चाप बढे पनि निराश नहुनुहोस्, अग्रजहरूको सहयोग जुट्नेछ र धेरै समस्या समाधान हुनेछन्।
पुरुषार्थी कामले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सहयोगी बन्नेछन्। तारिफयोग्य कामको यश लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। उद्योग र व्यापारमा मनग्गे फाइदा हुनेछ। महत्त्वाकांक्षी काम सम्पादन हुनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नेछन्। प्रशस्त धन र बहुमूल्य धातुहरू संग्रह गर्न सकिनेछ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – सुरुमा बल प्रयोग गर्नाले काममा बाधा हुनेछ। आकस्मिक समस्याले केही खर्च वा नोक्सान गराउने सम्भावना देखिएकाले महिनाको प्रारम्भमा सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्नुहोला। धनमाल सुरक्षामा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। अरूको विचारमा सहमत बन्न नसक्दा विद्रोही भावना जागृत हुनेछ। आत्मसम्मानका लागि संघर्षमा उत्रनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। शक्तिका लागि धन खर्च हुनेछ।
स्वास्थ्यमा पनि पित्तदोषले केही समस्या निम्त्याउनेछ। टाउको दुख्ने, पिनास, आँखा वा दाँतसम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ। अभिव्यक्तिको लय कठोर बन्नाले शुभचिन्तकहरू टाढिन सक्छन्। वादविवादमा अघि नसर्नुहोला। लेखन, संगीत र कलामा रुचि बढ्नुका साथै प्रतिभाले मान–सम्मान समेत दिलाउनेछ। उपकरणको मर्मत–सम्भारमा पनि धन खर्च हुनेछ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – वास्थ्यबाधा र केही आन्तरिक समस्याले सताए पनि यो महिनामा गरिएको कर्मसाधनाले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। आयआर्जनका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। तर केही द्वन्द्व र आलोचना जस्ता सामाजिक विघ्नबाधासँग भने संघर्ष भइरहनेछ। ज्वरो, टाउको दुखाइ तथा मौसमी समस्याले सताए पनि चैतन्य शक्ति जागृत हुनेछ।
आत्मविश्वास र दृढसंकल्पले कर्मसाधनामा सफलता प्राप्त हुनेछ। आफ्नो क्षेत्र, वर्ग र समाजलाई समेत बाटो देखाउन सफल भइनेछ। नोकरी तथा राजनीतिमा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। तारिफयोग्य कामले प्रशंसा, ख्याति र मानसम्मान दिलाउनेछ। आत्मसम्मानका साथ आम्दानी बढ्नेछ। विदेश ताक्नेहरूलाई पनि यात्रा तथा उत्तम रोजगारीको अवसर जुट्नेछ। दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ।